1. Ingabe ngempela umuntu kufanele alizwe kanjani izwi likaNkulunkulu? Ingabe umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ngempela nguNkulunkulu uSomandla yiNkosi uJesu ebuyisiwe? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
1. Ingabe ngempela umuntu kufanele alizwe kanjani izwi likaNkulunkulu? Ingabe umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ngempela nguNkulunkulu uSomandla yi…
Okwedlule: 6. Empeleni kufanele umuntu alibuke futhi alisebenzise kanjani iBhayibheli ngendlela ehambisana nentando kaNkulunkulu? Yini ukubaluleka kokuqala kweBhayibheli?
Okulandelayo: 2. Yini umehluko phakathi kwamazwi abantu esetshenziswa uNkulunkulu ezinkathini zonke ezihambisana neqiniso namazwi kaNkulunkulu?